Maamulaha Dahabshiil Group Oo Ka Hadlay Kulan Uu La Yeeshay Dhallinyaro Uu Gacan Ka Gaystay Waxbarashadoodda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Maamulaha Dahabshiil Group Oo Ka Hadlay Kulan Uu La Yeeshay Dhallinyaro Uu Gacan Ka Gaystay Waxbarashadoodda
London (SDWO): Maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Group Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale, ayaa ka hadlay kulan uu la qaatay dhallinyaro wax baratay oo uu gacan ka geystay waxbarashadooda.
Waxaa kaloo uu ka hadlay sida Dahabshiil Group mar walba ay u garab taagan tahay bulshada Soomaalida ah meel kasta oo ay joogaan.
C/rashiid Maxamed Siciid, waxa uu caddeeyay in ay marwalba diyaar u yihiin in ay gacan qabtaan oo ay taakuleeyaan dhallinyarada waxbaranaysa.
“Waxbartaha Soomaaliyeed ee dadkiisa kula noqonaya aqoontiisa waxa uu mudan yahay dhiirrigelin kasta oo ka kaalmaynaysa gaadhidda hadafkiisa waxbarasho, heer kastoo ay tahayba” sidaa waxa yidhi Cabdirashiid MS Ducaale, oo idaacadda VOA ku waraysatay barnaamijkeeda Martida Makarafoonka isagoo ku sugan London.
Maamulaha Guud ee Shirkadaha Dahabshiil Group, Cabdirashiid, waxa uu mar kale xaqiijiyey in shirkadaha Dahabshiil garab iyo gaashaanba u yihiin bulshada Soomaalida ee ay ka soo dhex baxeen, una adeegaan ee la dhaqan iyo dhiig baxaan.
Waxaanu yidhi “Cilmiga bulshada si toos ah ugu laabanaya ee mashaakillada manta haysta abbaaraya waa mudan yahay in la garab istaago”.
kookooban oo Tifatire Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo barnamijka isagu isku soo duway, daahinayeyna, uu Maamulaha ka weydiiyey kulan uu la qaatay 27 aqoonyahan oo wax ka baratay cilmiga Hoggaaminta (leadership), oo Dahabshiil gacan ka geystey.
Geesta kale waxa uu Maamuluhu tibaaxay in ardaydaas, marka ay soo afjaraan aqoonta ay barteen, ay bulshada kula noqon doonaan waxtar saamayn hoggaamineed ku biiriya dhinacyada amniga dhaqaalaha, siyaasadda, IWM.
Bushadaa aqoontoodu anfacaysaana aanay ahayn oo qudha tii dhulalka Soomaalida ee bulshada Soomaaliyeed ee, tusaale ahaan, Ingiriiska ku nool lafteedu u baahan tahay wax ka Kaaba ama la hatateeliya mashaakillada badan eek u haysta carrigan.
“Dhallinyaradan wax baratay, waxa ay tusaale u noqon karaan kumanaan kale oo arkaya in qofkii wax bartaa aanu ku dhici Karin dhibaatooyinka in badan oo dhallinyarada ah hadda haysta, wax wanaagsanna ku soo kordhin karo bulshada uu ka dhashay ama ku dhaqan yahay.
Waxa qofka dhallinyada ahi si tusayaa aqoonta iyo waxbarashada walaalkaa ama walaashaa samaysay maxaad ugu dayan weydey, taas oo uu fahmayo in haddii aanu sidaa yeelin noloshu ciil iyo carcaraaf iyo jeel u horseedi doonto” ayuu yidhi Maamuluhu.
Barnaamijyada daryeelka bulshada ee guud ahaanba shirkadaha Dahabshiil gacanta ka geystaan ama maalgelinta uu Bangigu sameeyo, waxa ay dhammaantood ku wajahan yihiin horumarinta kaabayaasha bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, shaqo-abuurka, Iwm.
Kuwaasoo dhammaantood si toos ah falgal togan ku leh nolosha qofka iyo mujtamacaba, taasina waa mid joogto uga mid ah qorshe-sannadlaha qaybaha kala duwan ee shirkadaha Dahabshiil.